Trano - Tongasoa eto amin'ny laboratoara Genimal Biotechnologies
Tonga soa eto amin'ny GENIMAL
Manome aDN vaovao ho an'ny sampan - draharahan'ny mpiompy izahay. Azonay antoka fa hahazo ny vokatra tsara indrindra foana ianao. Manantena izahay fa ho tianao ny hanao fitiliana ADN ho anay.
Fikashana ny ADN
Alàho ny valin-kafatra azoko
Araho ny fitiliana ny ADN-ko
Sampan-draharaha misahana ny zava-mahatalanjona
Toetra tsy voatohintohina
Ny laharam-pahamehanay dia ny hanome tolotra tsy manam-paharoa sy ambony indrindra. Miaraka amin'ny fandehan'ny asa mandeha ho azy, mbola mailo hatrany i Genimal amin'ny fanomezana. Ny vokatra mazava sy marina indrindra azo atao. Noho ny fomba fiasany amin'ny maha-zava-kanto azy.
Hafainganana ny vokatrao
Noho ireo robot mpandinika anay mandeha ho azy, dia manome vokatra amin'ny fotoana tena fohy.
Areti-mifindra. : 1-3 andro
Aretin'ny fototarazo, Colotest : 1-6 andro
ADN manao firaisana ara-nofo : 1-3 andro.
Ny vidiny tsara indrindra
Manao izay tsara indrindra vitantsika izahay mba hanomezana anareo ny ny vidiny tsara indrindra isaky ny fitsapana ADN. Ho an'ny mpiompy na ny fanadihadiana be dia be, manome izahay. teny notsongaina.
Azo antoka ny mari-pankasitrahana momba ny ADN
Ny mari-pankasitrahana rehetra amin'ny ADN dia tonga miaraka amin'ny mari-pamantarana fanamarinana tamper-tsy azo ihoarana.
Fandoavam-bola maimaim-poana amin'ny 3X
Ny fandoavam-bola maimaim-poana amin'ny 3x dia manan-kery amin'ny fividianana 79 €.
Fitsongoan-dia tsara indrindra
Email mandeha hoazy rehefa mahazo ny santionanao. Fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy ny fivoaran'ny fanadihadianao. Afaka miditra maharitra amin'ny mari-pankasitrahana ADN anao.
Vokatry ny fanehoan-kevitra
Saika ny fitsapana rehetra ataontsika dia azo ampiasaina amin'ny alalan'ny safidy an-kira. Amin'ny alalan'ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny fanadihadianao, manome antoka anao izahay fa ho afaka hanemotra izany ianao.
Miafara amin'ny fiteny maherin'ny 117 ny fanadihadiana ataonao mba hanamorana ny fifanakalozana eo amin'ny firenena roa tonta.
Manafatra andiana fitiliana ADN amin'izao fotoana izao mba hahazoana vidiny tsara kokoa ary avy eo dia alefaso amin'ny fotoana samihafa ao anatin'ny 2 taona ny santionany aminao. Ohatra, afaka mandefa santionany 2 ianao rahampitso, 3 hafa ao anatin'ny roa volana sns.
Te-hanafatra fitiliana ADN ho ahy aho.
Ny fitiliana farany indrindra ataontsika amin'ny ADN
Tahaka ny zavatra hitanao?
Hijery vaovao misimisy kokoa
Misy fitiliana ADN
Natao ny fitiliana ADN
Ny faritra misy antsika
Misy fiteny misy
Fantaro ny tena fanatsarana eo amin'ny fitiliana ADN
Ny fomba fiasan'izany
Tsotra be ny asa ataontsika...
Manafatra ny fitiliana ADN ary misorata anarana ny biby fiompinao.
Boky firaketana de l' évangile
Handefa anao ny kitapo fanangonanao izahay na amin'ny tranga sasany dia afaka mampiasa ny anao manokana ianao.
Angony ny santionanao ary alefaso any amin'ny laboratoaranay.
Alàho haingana ny vokatrao amin'ny alalan'ny mailaka, paositra, SMS ety.
Jereo amin'ny dingana samihafa amin'ny didy iray io lahatsoratra amin'ny an - tsipiriany io.
Ampidiro ny adiresy e-mail
Ampidiro ny adiresy e-mail anao azafady
Tsy marina ity adiresy email ity
Efa anarana tsara ny newsletter
Efa subscribed ny newsletter
Mifantoha amin' ny vaovao lastest
Hampahafantarina amin' ny lastest ADN ireo fitsapam-pahaizana.
Hampahafantarina amin' ny fampiratiana
Mandray anjara amin' ny fandaharan' asa fikarohana ataontsika
Ny toetra tsara no laharam-pahamehana ho antsika
Ireo mpiasantsika tena voaofana tsara no nampiasa ny teknolojia avo lenta indrindra tamin'ny taonjato faha-21 mba hanomezana fahafaham-po ny zavatra manokana ilain'ny fitiliana ADN tsirairay.
Tsy nitsahatra nampiasa vola tamin'ny hoavin'ny fitiliana ADN amin'ny alalan'ny fividianana fitaovana fanapahana ny Genimal Biotechnlologies. Mampiasa robot mandeha ho azy isika, izay manome tolotra miavaka sy marina ary marina ho an'ny fitiliana ADN rehetra ataontsika.
Manana mpanjifa sy mpitsabo biby maherin'ny 10000 manerana izao tontolo izao izay miara-miasa amintsika izay omentsika ny tolotra miavaka sy manokana indrindra ny Genimal Biotechnologies.
Miaraha aminay !
Mavitrika amin'ny fampandrosoana ny fitiliana ADN vaovao ny Genimal, indrindra eo amin'ny sehatry ny aretina zenetika eo amin'ny alika, ny saka ary ny soavaly.
Fifandraisana mahafinaritra amin'ny tontolo iainana
Vonona ny hamolavola firesaka vaovao izay manaja kokoa ny tontolo iainana i Genimal. Ny Ethidium bromide (tasy misy asidra) dia nilaozana ho an'ireo vokatra tsy misy poizina. Niha-nalavo tao anatin'ny 10 taona ny fanehoan-kevitra.
Manatona ny taranaka manaraka
Ny firesaka rehetra amin'ny fitiliana ADN dia mivoatra tsikelikely mankany amin'ireo fomba fanaon'ny taranaka vaovao izay miantoka vokatra azo antoka sy haingana kokoa (matetika 1 andro).
Fiarovana ny bibidia
Mandray anjara amin'ny fikarohana momba ny fiarovana ny bibidia sy ny fonenany ny Genimal. Miara-miasa amin'ny ONCFS izahay amin'ny fandaharan'asa samihafa sy amin'ny valan-javaboaharin'ny biby.
Noho ny teknolojia vaovao, namolavola ny GENIMAL Safidin'ny fanehoan-kevitra. Safidy mahatalanjona izany ary miantoka ny vokatra amin'ny fotoana fohy indrindra azo atao.
Aretin'ny fototarazo sy loko 72h
Eny an-dàlana ny aroaro ny taranaka Express manaraka ary ny ankamaroan'ny aretina fototarazo dia ho hita amin'ny 24h amin'ny hoavy tsy ho ela.
Fanarahana ny ADN
Fantaro foana ny fandrosoan'ny fandalinany.
Mankany amin'ny rafitra fanaraha-maso
Fampifandraisana ny fitsapana ADN sy ny fiarovana
Manana ny fankatoavana rehetra momba ny ADN ireo fankatozana ADN-ntsika rehetra Mari-pamantarana ny fiarovana. Porofon'ny tamper ity mari-panondroana ity.
Hamarino ilay fankatozana
Voaaro tanteraka ny tranonkalanay ary voaaro ny fidirana amin'ny angon-drakitrao rehetra.
Milaza Momba Anay ny Mpanjifantsika
Tokantrano Fanavahana amin'ny ankapobeny: ★★★★★ 4.9 miainga avy amin'ny 150 famerenana.